Sonication साथ क्यानाबिनोइड्स को क्रिस्टलीकरण - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
क्रिस्टलीकरण CBD पृथक उत्पादन गर्न क्रिस्टलाइजेशन एक आवश्यक प्रक्रिया चरण हो। अल्ट्रासोनिक न्यानो क्रिस्टलीकरण (Sono-crystallization) व्यापक रूपमा क्रिस्टलीय अलगावहरू तयार गर्न प्रयोग गर्दछ जस्तै सीबीडी एक सुपरस्याच्युरेट समाधानबाट अलगाव। उच्च-शक्ति अल्ट्रासाउन्ड फ्रिक्वेन्सी तरंगहरू द्वारा, तीव्र आन्दोलनले प्रिस्टाइन सीबीडी क्रिस्टलको गठनको प्रचार गर्दछ। अल्ट्रासोनिक क्रिस्टलीकरण क्रिस्टल सीडीबी पृथकको उत्पादनको लागि निश्चित रूपमा नियन्त्रणयोग्य, अत्यधिक कुशल र द्रुत विधि हो।
अल्ट्रासोनिक CBD क्रिस्टलीकरण
CBD पृथकको क्रिस्टलीकरण एक वर्षा प्रक्रिया हो जहाँ CBD solids विलायकमा बनेको हुन्छ। CBD क्रिस्टलाइज गर्नका लागि, घोलक (अर्थात् आसुत सीबीडी तेल) एक सुपरस्याच्युरेट समाधानको रूपमा विलायकमा विघटन गर्न आवश्यक छ। अल्ट्रासोनिक तरंगहरू बाह्य उत्तेजनाको रूपमा कार्य गर्दछन् जसले क्रिस्टल बीज (न्यूक्लियसन) को गठन सुरू गर्दछ र क्रिस्टल वृद्धिलाई बढावा दिन र नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ।
सामान्यतया प्रयोग हुने सॉल्भन्ट्स: पेन्टाइन वा हेप्टेन।
कसरी Ultrasonication CBD क्रिस्टलाइजेशन प्रचार गर्छ?
अल्ट्रासोनिकेसन एक अत्यधिक कुशल आन्दोलन विधि हो जसले एक विलायकमा सीबीडी एक्स्ट्र्याक्टको एक सजातीय सुपरसचृप्त समाधान उत्पन्न गर्दछ। सुपरस्याचुरेटेड समाधानको गहन अल्ट्रासोनिक उत्तेजनाको क्रममा क्रिस्टल बीजले गठन गर्न सक्दछ जुन पछि सीडीबी क्रिस्टलको बृद्धि बिन्दुको रूपमा कार्य गर्दछ। अल्ट्रासोनिक आन्दोलनले आरम्भिक क्रिस्टल बीज र सुपरस्याचुरेटेड समाधानको बीचमा सामूहिक स्थानान्तरणलाई तीव्र गर्दछ ताकि क्रिस्टलहरू छिटो र एक समान रूपमा बढ्नेछन्। यसको मतलब Sonication सीबीडी क्रिस्टलको उत्पादन प्रमोट गर्न र नियन्त्रण गर्न को लागी एक धेरै कुशल प्रविधी हो।
अल्ट्रासोनिकेटरको साथ रिएक्टर UIP2000hdT क्यानाबिनोइड्सको Sono-crystallization को लागी
अनुसन्धान के भन्छ
“जब अल्ट्रासाउन्ड क्रिस्टलीकरणको लागि समाधानमा लागू गरिन्छ, यसले क्रिस्टल उत्पादनहरूको गुणलाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। अल्ट्रासोनिक विकिरण प्रेरण समय र मेटास्टेबल क्षेत्र कम हुन्छ र न्यूक्लियसन दर बढ्छ। यी प्रभावहरूको कारण, यसले सामान्य रूपमा सानो आकारको वितरणको साथ क्रिस्टलहरू उत्पादन गर्दछ जब पारम्परिक क्रिस्टलीकरणसँग तुलना गरिन्छ। साथै, अल्ट्रासोनिक इरेडिएसनले क्रिस्टलको टकराव वा सोनोफ्रेग्मेन्टेशनको कारण हुने अवस्थित क्रिस्टलको बिखण्डन गर्न सक्छ। " [किम र सुसलिक, २०१]]
क्यानाबिनोइड्सको उत्तेजित क्रिस्टलीकरण
अल्ट्रासोनिक क्रिस्टलीकरण (Sono-crystallization पनि भनिन्छ) नियन्त्रणित स्प्रिस्टलाइजेशनको एक रूप हो, जुन तीव्र अल्ट्रासोनिक आन्दोलनको कारण तीव्र क्रिस्टल गठन द्वारा पारम्परिक वर्षा प्रविधिलाई पार गर्दछ। अल्ट्रासोनिक स्ट्रिringिंग र मिक्सिंगले उच्च गतिज शक्तिहरू CBD निकाल्ने र विलायकको मिश्रणमा परिचय गर्दछ। यसैले, एक सुपरसचुरेटेड समाधान उत्पादन हुन्छ जुन पछि अल्ट्रासोनिक आन्दोलनले क्रिस्टलाइजेशन रेटको गति बढाउने द्रुत ट्रान्सफरलाई बढावा दिन्छ। अल्ट्रासोनिक क्रिस्टलीकरण एक द्रुत प्रक्रिया हो, जुन ठीकसँग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसले वर्दी क्रिस्टल आकार र एक लगातार उच्च उत्पाद गुणस्तर मानकको विकासको लागि सक्षम गर्दछ। अल्ट्रासोनिक क्रिस्टलीकरण युनिट माइक्रोन- वा न्यानो-आकारको क्रिस्टलको क्रिस्टलीकरणको लागि Sonication प्यारामिटरहरूको समायोजन गरेर अनुमति दिन्छ। स्थापना प्रक्रिया प्यारामिटरहरू प्रयोग गरेर क्रिस्टलहरू अनुरूप आकारमा बढाउनुहोस्। Sono-crystallization को प्रयोग गरेर, यो न्यानो आकारको क्रिस्टलको बृद्धि गर्न सम्भव छ, जसले उत्कृष्ट जैव उपलब्धता प्रदान गर्दछ र ग्राहकहरु द्वारा उच्च दक्षता र स्पष्ट स्वास्थ्य लाभको लागि मूल्यवान छ। Sono-crystallization प्यारामिटरहरुमा सहि नियन्त्रणले पुनरावृत्ति योग्य / पुन: उत्पादन योग्य परिणाम दिन्छ। यसबाहेक, क्यानाबिनोइड्सको अल्ट्रासोनिक क्रिस्टलाइजेशन कुनै पनि उत्पादन खण्डमा पूर्ण रैखिक मापन गर्न सकिन्छ। अल्ट्रासोनिक क्रिस्टलाइजेशनको परिणामले उच्च-गुणस्तरको CBD पृथक हुन्छ, डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाहरू जस्तै शुद्धीकरण कम से कम हुन्छ।
The UP200St क्रिस्टलाइजेशनको गति र सुधार गर्नको लागि हलचल गरिएको रासायनिक रिएक्टरहरूमा एकीकृत गर्न सकिन्छ।
Ultrasonication बढावा दिन्छ
प्रतिक्रियाशील क्रिस्टलीकरण / वर्षा
सीबीडी अलग उत्पादनको लागि अल्ट्रासोनिक क्रिस्टलाइजरहरू
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स उच्च-प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक क्रिस्टलीकरण प्रक्रियाहरूको लागि तपाइँको दीर्घकालीन अनुभवी साझेदार हो। हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्सले ब्याच र अविरल इनलाइन प्रोसेसिंगको लागि अल्ट्रासोनिक क्रिस्टलीकरण उपकरणको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स उपकरण उपकरणहरू विश्व खाद्य र औषधि प्रसंस्करण सुविधा मा स्थापित छ र उच्च गुणवत्ता मापदण्ड पूरा गर्दछ। प्रक्रिया मानकीकरण, निरन्तर उच्च उत्पादको गुणस्तर र राम्रो उत्पादन अभ्यास (GMP) को लागी उपयुक्त, हिल्सचर अल्ट्रासोनिक क्रिस्टलीकरण प्रणालीहरू तपाईंको उत्कृष्ट उत्पादन मापदण्डहरूको लक्ष्यहरू अनुरूप छन्।
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्सको क्यानाबिनोइड क्रिस्टलीकरण प्रणालीको फाइदा
माइक्रोन- र न्यानो आकारको क्रिस्टल (समायोज्य)
क्रिस्टल वृद्धि निश्चित रूपले नियन्त्रित
वर्दी क्रिस्टल वृद्धि
सिge्ग-पास / एक-पोट प्रक्रिया
दोहोर्‍याउने, पुन: उत्पादन योग्य परिणाम
Sonocrystallization को लागी उच्च आयामहरु
उच्च-आयाम अल्ट्रासाउन्ड तरंगहरूसँग Sonication कम समय आयाम तरंगहरू साथ Sonication भन्दा अधिक प्रेरण समय कम भयो। [किम र सुस्लिक, २०१]] उच्च आयाममा उच्च-शक्ति अल्ट्रासोनिकेसनले लगातार तीव्र माइक्रो-टर्बुलेन्स, कतराहरू र आन्दोलन उत्पन्न गर्दछ। यी सूक्ष्म र म्याक्रो-आन्दोलनले सुपरसिच्युरेट स्लरीमा परिणामस्वरूप ठूलो ट्रान्सफर र क्रिस्टलाइजेशन दरमा वृद्धि भएको छ। हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स’ औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर धेरै उच्च आयाम वितरित गर्न सक्छन्। २००µm सम्मको एम्प्लिट्यूड सजिलै निरन्तर २ 24/7 अपरेशनमा चलाउन सकिन्छ। अझ उच्च आयामका लागि पनि, अनुकूलित अल्ट्रासोनिक सोनोट्रोडहरू उपलब्ध छन्।
सबै उपकरणहरू २ load/7/ .65 full full को लागि पूर्ण लोड अन्तर्गत प्रयोगको लागि निर्माण गरिएको हो र यसको दृढता र विश्वसनीयताले यसलाई तपाईंको सोनो-क्रिस्टलीकरण प्रक्रियामा काम घोडा बनाउँछ। यसले हिल्सचरको अल्ट्रासोनिक उपकरणलाई एक विश्वसनीय काम उपकरण बनाउँदछ जुन तपाईंको सोनो-क्रिस्टलीकरण आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
उत्कृष्ट स्फटिकरणको लागि निश्चित रूपले नियन्त्रित आयामहरू
सबै Hielscher अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर ठ्याक्कै नियन्त्रण योग्य छन् र त्यहाँ R मा भरपर्दो काम घोडा&डी र उत्पादन। आयाम एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया प्यारामिटर हो जुन Sono-crystallization को दक्षता र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्दछ। सबै हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स’ प्रोसेसरहरू आयाम को सटीक सेटिंग को लागी अनुमति दिन्छ। हिल्सचरको औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरू धेरै उच्च आयामहरू वितरण गर्न र अनुप्रयोगहरूको माग गर्नको लागि आवश्यक अल्ट्रासोनिक गहनता प्रदान गर्न सक्छ। २००µm सम्मको एम्प्लिट्यूड सजिलै निरन्तर २//7 अपरेशनमा चलाउन सकिन्छ।
सटीक आयाम सेटिंग्स र स्मार्ट सफ्टवेयर मार्फत अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया प्यारामिटरहरूको स्थायी अनुगमनले तपाईंलाई सोनो-क्रिस्टलीकरण प्रतिक्रियालाई ठीक रूपमा प्रभाव पार्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ। प्रत्येक Sonication चालुको क्रममा, सबै अल्ट्रासोनिक प्यारामिटरहरू स्वचालित रूपमा अंतर्निहित SD-कार्डमा रेकर्ड हुन्छन्, ताकि प्रत्येक रन मूल्याated्कन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सब भन्दा कुशल Sono-crystallization को लागी इष्टतम Sonication!
तापमान नियन्त्रण Sonication
क्यानाबिनोइड्सको क्रिस्टलीकरण प्रक्रियाहरूको लागि, तापमान एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया प्यारामिटर हो जसले सीबीडी क्रिस्टलको नतीजा र गुणवत्तालाई असर गर्छ। हिल्सचर Sono-crsytallization रियाटरहरू प्रक्रिया तापमानलाई दायरामा राख्न कूलि jac ज्याकेटले सुसज्जित छन्। यसबाहेक, हाम्रो Sono-crsytallization प्रणाली बुद्धिमान सॉफ्टवेयर छ कि एक प्लग्याबल तापमान सेंसर को माध्यम बाट प्रक्रिया तापमान निगरानी सुविधा। प्रयोगकर्ता-मैत्री मेनूमा, प्रयोगकर्ताले माथिल्लो र तल्लो तापमान सीमा सेट गर्न सक्दछ। चाँडै प्रक्रियाको तापमानले सेट तापमानको दायरा भन्दा बढि चाँडै, अल्ट्रासोनिकेटर पज गर्दछ जब सम्म तापक्रम प्रि-सेट ∆T मा फिर्ता हुँदैन। यसले तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण प्यारामिटर "तापमान" मा सटीक नियन्त्रण दिन्छ।
युनिफॉर्म क्रिस्टलको लागि मल्टिफेसकेविटेटर
मल्टीफेसकेविटेटर एमपीसी 48 एक अद्वितीय फ्लो सेल सम्मिलित हो जुन phase 48 क्यान्युलासको सुविधा दिन्छ दोस्रो चरण (जस्तै, सीबीडी डिस्टिलेट) सिधा काभिटेशनल हट-स्पटमा इन्जेक्सन गर्न। यसैले, सीबीडी डिस्टिलेट र विलायकको अत्यधिक समान मिश्रणले सुपरस्याचुरेटेड समाधानको गठन गर्दछ, जसमा CBD क्रिस्टलको केन्द्रक गठन हुन्छ। अल्ट्रासोनिक रिएक्टरमा जोखिमले ठ्याक्कै नियन्त्रणयोग्य न्यूक्लियसन र क्रिस्टल विकासको लागि अनुमति दिन्छ। मल्टीफेसकेविटेटरले क्रिस्टलाइजेसन प्रक्रियाहरू अत्यधिक कुशल बनाउँदछ र प्रक्रिया मानकीकरणको लागि सटीक नियन्त्रणको कारण अनुमति दिन्छ। एक उच्च मानकीकृत उत्पादन प्रक्रिया राम्रो उत्पादन प्रक्रिया (GMP) को अंश हो र उच्च गुणस्तरको निरन्तर उत्पादनहरू उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक रिएक्टरको साथ मल्टीफोन एक्स्टाटर सुधार गरिएको Sono-crystallization को लागी
अब हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामीलाई तपाईंको Sono-crystallization आवश्यक्ताहरूको बारेमा बताउनुहोस्! हामी तपाईंलाई सबैभन्दा उपयुक्त अल्ट्रासोनिक क्रिस्टलाइजर र रिएक्टर सेटअप सिफारिस गर्दछौं!
पेन्टेन विलायकको रूपमा
एन-पेन्टाइन (सीएएस नं। १० -6 --6-०) एक हाइड्रोकार्बन सॉल्भन्ट हो, जुन सामान्यतया CBD जस्ता क्यानाबिनोइड्सको क्रिस्टलीकरणका लागि लागू हुन्छ।
“एन-पेन्टेन मौखिक वा इनहेलेसन मार्गहरू द्वारा विषाक्त रूपमा विषाक्त थिएन, यो छाला वा आँखा उत्तेजित थिएन र छालाको संवेदनशीलतालाई प्रेरित गर्दैन। यसले २०००० मिलीग्राम मीटर (-3) सम्मको स्तरमा संचयी विषाक्तता प्रदर्शन गरेन जुन तल्लो विस्फोटक सीमाको लगभग आधा र परीक्षणको लागि सुरक्षित मानिने उच्च स्तर हो। यसले विकासको विषाक्तता जगाउँदैन र म्यूटेजेनिक थिएन। यस र अन्य अवस्थित जानकारीबाट, यो निष्कर्ष निकालिएको छ कि एन-पेन्टाइनले सम्भावित विषाक्त जोखिमहरूको लागि वर्गीकरण आवश्यक पर्दैन (ईयु खतरनाक पदार्थ निर्देश, १ 199 199 of को एनेक्स VI द्वारा परिभाषित गरिएको छ), जबकि भौतिक गुणहरूले संकेत गर्नु उचित हुनेछ भनेर संकेत गर्दछ। आकांक्षा को लागि सम्भावित को लागी। यसका अतिरिक्त वर्तमान व्यवसाय सम्बन्धी सिफारिशहरूलाई कम गर्न कुनै कारण छैन। अन्तमा, त्यहाँ एन-पेन्टाइनको ज्वलनशीलता सम्बन्धी केहि सुरक्षा मुद्दाहरू छन्, उच्च उपचारको स्तरमा कुनै विषाक्तता नहुनुले जनसंख्याको सबै वर्गमा प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावको जोखिम कम हुने संकेत गर्दछ। " (म्याकी एट अल। १ 1998 1998))